कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले वजेटमा भएको गल्ती पत्ता लगाएपछि, अर्थमन्त्रीले खतिवडाले दिए धन्यवाद « Light Nepal
कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले वजेटमा भएको गल्ती पत्ता लगाएपछि, अर्थमन्त्रीले खतिवडाले दिए धन्यवाद
Published On :2June, 2019 2:18 pm
काठमाडौं, १९ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दा बजेट पुस्तिकामा भएको त्रुटि नेपाली कांग्रेसले पत्ता लगाएको
छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपली कांग्रेसका सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले उक्त त्रुटिबारे जानकारी गराएका थिए । उनले त्रुटिवारे जाकारी दिँदै अर्थमन्त्रीको जवाफ समेत मागेका थिए ।
कांग्रेस नेता रिजालले वजेटमा भएको त्रुटि देखाइदिएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धन्यवाद दिएका छन् । उनले वजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै सरकारले उठाउने कुल राजस्वबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने राजस्व घटाउनुपर्ने बताए ।